Manchester United Oo Qorsheyneysa Heshiis Isdhaafsi Oo Ku Saabsan Lingard Iyo Rice
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Manchester United oo qorsheyneysa heshiis isdhaafsi oo ku saabsan Lingard iyo Rice
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay baareyso suurtagalnimada heshiis isdhaafsi ah oo ay ku lug leeyihiin Jesse Lingard iyo Declan Rice oo ay la qaadaneyso West Ham United .
Lingard ayaa door muhiim ah ka qaatay West Ham tan iyo markii uu amaah kaga soo dhaqaaqo Old Trafford bishii Janaayo, isagoo dhaliyay lix gool caawiye ka ahaa afar sideed kulan oo uu saftay Premier League.
Ilo ka tirsan kooxda ayaa xaqiijiyay in West Ham ay sameyn doonto “wax walba oo ay ku qaadato” saxiixa ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England, waxaana Man United la fahamsan yahay inay madaxiisa dul dhigtay £ 30m .
Si kastaba ha ahaatee, The Athletic ayaa qortay in Red Devils ay taa badalkeeda mari karto waddo kale, maadaama Ole Gunnar Solskjaer uu aad u jecel yahay Rice isla markaana uu xiiseynayo inuu heshiis isweydaarsi ah la sameeyo saaxiibkiisa caalamiga Lingard
Rice wuxuu ahaa mid waligiis ka ciyaara qadka dhexe ee Hammers ka hor inta uusan dhaawac jilibka ah gaarin, laakiin 22 jirkaan ayaa rajeynaya inuu ku soo laabto waqtiga Koobka Qaramada Yurub ee xagaagan.
Previous articleTababarihii hore ee Xidiga Erling Braut Haaland oo sheegay Horyaalka uu jecelyahay
Next articleLiverpool, iyo Chelsea oo ku dagaalamaya saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ajax Ryan Gravenberch